EA052 - Device fampandrenesana vonjy taitra OMG Wireless Wristband | Vahaolana OMG
Momba ilay fitaovana:
Ampahafantaro ny namanao sy ny fianakaviana avy hatrany amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra an-tsoratra maika na na antso an-telefaona hatramin'ny 3 miaraka amin'ny GPS
IOS Android mifanentana amin'ny mpampiasa App
Naorina ao amin'ny batteria azo soloina Miaraka amin'ny androm-piainan'ny 1 taona
Fanampiana bokotra fotsiny no fanampiana: Famolavolana ny Fihetseham-po momba ny vonjy maika ho an'ny tena manokana, fitaovana mora ampiasaina miaraka amina finday avo lenta mba handrenesana fanairana ary handefa antso maika sy hafatra an-tsoratra miaraka amin'ny tsindry bokotra. Antsoy ny fanampiana na aiza na aiza no ilanao izany. Ny Device dia fitaovana natao ergonomika izay azo entina am-pitandremana ao am-paosy na kitapom-batsy, na ampiakanana iray amin'ireo safidy fidirana maro toy ny pendant, wristband, na fehikibo fehikibo (amidy misaraka).
Teknolojia farany: Amin'ny fampiasana teknolojia Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 LE), ny Device dia manomboka antso sy hafatra an-tsoratra avy amin'ny smartphone (iOS na Android) voatondro. Miaraka amin'ny tsindry bokotra tokana, ny Device dia mandefa baiko amin'ny findainao finday handefasana ny toerana misy anao miaraka amina hafatra an-tsoratra namboarina hatramin'ny fifandraisana efa voafantina telo. Ny Device aza afaka manomboka ny antso an-tarobia avy amin'ny finday avo lenta mba hahazoana antoka fa mahazo ny sain'ny olonao ianao.
Filaminan-tsaina: Ny Device dia manana endrika detection of fall izay handefa fampandrenesana raha mahita ny fianjera tampoka izay mety tsy nahatonga ny mpampiasa tsy hisian'ny fanerena bokotra fanairana. Tena rano maloto, miasa ny fitaovana ao amin'ny fandroana ary mandritra fanazaran-tena. Tsy mila recharge satria manolotra herintaona ampiasaina alohan'ny mila hanolo ny bateria.
Text & Call: Rehefa avy nanindry ny bokotra ianao, dia nandefa baiko tamin'ny findainao ny Device mba handefa hafatra an-tsoratra amin'ireo fifandraisana efa narotsakao, narahina antso an-telefaona. Io fihetsika fampitandremana io dia azo natao tanteraka.
GPS toerana: Ho fanampin'ny hafatra fanairana sy ny antso an-telefaona, ny toerana avy amin'ny telefaona finday dia afaka alefa any amin'ireo olona mifandray anao.
Fahatongavana latsaka: Ny mpampiasa dia afaka mamadika ny Fall Detection mba ahafahan'ny alàlan'ny fandefasana fampitandremana aorian'ny minitra vitsy.
Wireless Range: Ny Device dia tsy maintsy ao anatin'ny sehatry ny findainao hiasa. Izy io dia manana tamba-jotra tsy misy tariby hatramin'ny 22 metatra ao anatiny na hatramin'ny 90 metatra ivelan'ny trano mampiasa Bluetooth 4.0.
Life Battery: Ny bateria dia manana herin'ny herin'ny bateria rehetra ary herin'ny bateria fijerena CR2032 mahazatra. Ny bateria dia azo esorina ary nosoloan'ny mpampiasa.
Tsy tantera-drano: Mety ho an'ny fandroana na fakana aina mahery vaika, ny rano dia feno rano hatramin'ny halalin'ny 1 metatra mandritra ny 30 minitra.
Fampandrenesana: Raha mandalo ivelan'ny telefaona avy amin'ny telefaona ilay Device, hahazo fampandrenesam-peo ireo fitaovana roa ireo.
Volavola kely sy matevina: Amin'ny savaivony 3.3 cm fotsiny, dia mety mifanaraka tsara amin'ny fitaovana rehetra tianao ny Devoly.
Modely mangina: Ho fampiasa ho toy ny fanairana mangingina na bokotra mikoropaka, ny mpampiasa dia afaka mihetsika mode Silent ao amin'ny App hamonoana ny fanairana na fampandrenesana fahitana.
Android & iOS mifanentana: Ny Device dia miasa amin'ny iPhone 4S / iOS 7 na vaovao sy misy smartphone rehetra mampiasa ny Android 4.3 na vaovao miaraka amin'ny Bluetooth 4.0.
Size: Halavany 32 mm, savaivony 10 mm
Weight: 8 grama
tontolo iainana: Rano mandeha hatramin'ny 1 metatra mandritra ny 30 minitra
Life Battery: Miakatra hatramin'ny herintaona arakaraka ny fampiasana
Karazana bateria: Bateria efa vita mialoha sy azo soloina (solo)
Range: Ny teknolojia Bluetooth 4.0 dia manome alàlan'ny 22 metatra ao anaty trano ary hatramin'ny 90 metatra eo anelanelan'ny Device sy smartphone
Accessories: Wristband sy pendant / keychain ampidirina ao anaty boaty (Tsy tafiditra ao ny tadiny.)
14073 Total Views 6 Views Today
EA999-BP06 - OMG Wireless Watch Wristband…
EA999-BP09 - OMG Hopitaly Wristband Watch Wireless…